Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » UMphathiswa waseSeychelles wezoKhenketho kwii-DMC
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
UMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho kunye noNobhala oyiNtloko weSeychelles yoKhenketho udibene neenkampani ezininzi zolawulo lwendawo ekuyiwa kuyo.
Eqhubeka nomsebenzi wakhe wokuziqhelanisa namaqabane oshishino lwezokhenketho kunye neemveliso zawo, uMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho kunye no-Nobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, u-Ambassador Sylvestre Radegonde, wadibana neenkampani ezininzi zolawulo lwendawo ezisiya kuyo ngoLwesine we-12 Agasti 2021.
Ngexesha leentlanganiso zakhe, uMphathiswa wacela imveliso kunye nokwahluka kwenkonzo.
Uye wachukumisa isidingo sokubandakanya inkcubeko yelizwe laseSeychellois kunye nelifa lemveli kunikelo lwelizwe lokhenketho.
UNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, uNkosazana Sherin Francis, uhambe noMphathiswa uRadegonde kukhenketho lweentlanganiso.
UMphathiswa uRadegonde ubambe ithuba lokumemelela ukwahluka kweemveliso kunye neenkonzo, eqaqambisa nemfuno yokuphucula amava abatyeleli ngokubandakanya inkcubeko yelifa laseSeychellois nelifa lemveli kwiminikelo yethu yokhenketho.
Utyelelo ngolwe-Lwesine luqale e-Pure Escape, i-DMC yexabiso eliphambili emarikeni yayo iphambili iRussia kwaye ineeofisi e-UK, Maldives, Seytshels kunye ne-UAE ebonelela ngeephakeji kubathengi bayo kubandakanya nabangcamli babucala kunye nezikhokelo zabakhenkethi.
Ezinye iinkampani zibandakanya ukhenketho lweSilivere Pearl kunye noKhenketho olunikezela ngemisebenzi eyahlukeneyo kubandakanya ukhenketho kunye nokutshintshelwa kwabucala, kunye neCheung Kong Travel, ikakhulu ejolise kwimakethi yaseTshayina, ibonelela ngezikhokelo ezikhethekileyo zeelwimi kubo bobabini abahambi kunye neepakethi zabo.
UMphathiswa u-Radegonde uphinde wadibana nee-DMC ezininzi ezise-Seychellois kubandakanya i-Summer Rain Tours, enikezela uluhlu lweepakeji kunye neenkonzo zamanqanawa e-Saudi Arabia, eRashiya nase Europe, kunye ne-Ocean Blue Travel, inkampani enosapho, enxibelelana nabathengi I-UAE, iJamani kwiwebhusayithi yabo.
Ezinye ii-DMC eziphantsi kwe-Seychellois ezihanjelweyo zibandakanya uKhenketho lokuHamba olunikezela iiphakheji zokuhamba zeenkampani, abantu kunye namaqela kwiimarike zaseYurophu naseMbindi Mpuma, kunye nohambo lokuHamba olunikezela iiphakheji zokunethezeka kwiimarike zaseRussia nezaseMbindi Mpuma.
“Inxalenye ebalulekileyo yemisebenzi yam yomphathiswa ukwazi amaqabane kunye nokuqonda ishishini labo. Olu tyelelo lusivumela ukuba sibonise umbulelo wethu kwaye ikakhulu siyabakhuthaza ukuba bazame ukubonelela ngeenkonzo kunye neemveliso ezingcono kwiindwendwe zethu, utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Ukongeza kokuziqhelanisa nee-DMCs, uMphathiswa uRadegonde ubonakalise isidingo seshishini lokwahluka kwemveliso kunye nokukhuthaza ukhenketho lwenkcubeko. "Ukuphakama kwenkcubeko yesiCreole ayizukuphucula kuphela amava abahambi kodwa iyakukhanyisa inkcubeko yethu kunye nendawo yokuhlala yamagcisa kwaye ibonelele amagcisa asekuhlaleni ngeqonga lehlabathi," utshilo uMphathiswa.
USosiba Oyintloko wezoKhenketho, uNksk Sherin Francis, obehamba noMphathiswa uRadegonde kolu khenketho, uthe utyelelo rhoqo lithuba lokudibanisa kunye namaqabane kwaye bayayiqonda imiceli mngeni yabo, ethi ke yona incede iSebe lezoKhenketho ukuba ligxile ekuphuculeni amava omthengi ngendawo afikelela kuyo kuyo yonke imigangatho.
Olu tyelelo luye lwakhanyisa ngemiba eyahlukeneyo kunye nenkqubela phambili kwicandelo lezokhenketho nakwiindawo ezahlukeneyo zentengiso yelizwe.